November 10, 2021 - Babal Khabar
Nov102021 by बबाल खबरNo Comments
५० वर्षे आमाका लागि बेहुला खोज्दै यी युवती ! कारण के होला ? जान्नुस
भिडियो हेर्नुस, एजेन्सी। आमा–बुवाले आफ्ना सन्तानको विवाहका लागि पत्रपत्रिकामा विज्ञापन दिने चलन नेपालमा पनि बढेको छ। भारतमा यस्ता विज्ञापन मेट्रोमोनियलमा दिने गरिन्छ। यसबारे हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ। तर यहाँ एउटा ट्वीस्ट छ, त्यसकारण त यो खबर रोचक भयो। भारतमा एक छोरीले आफ्नी आमाका लागि दुलहाको खोजी गरिरहेकी छिन्।परिवर्तित समाजमा उनको यो कदमलाई जताततै प्रशंसा गरिँदै छ। यसैकारण छोरीले गरेको ट्वीट तीब्र रुपमा भाइरल भइरहेको छ। आस्था वर्मा नामकी युवतीले ट्वीटरमा आफ्नो र आमाको तस्बिर सेयर गर्दै लेखिन्, ‘आफ्नी आमाका लागि ५० वर्षका ह्यान्डसम व्यक्तिको खोजीमा छु।उनी शाकाहारी, म'द्यपान नगर्ने र राम्रो तरिकाले स्थापित हुनुपर्छ।’ आस्था आफ्नी आमाका लागि यस्तो दुलहाको खोजीमा छिन् जो हेर्दा ह्यान्डस हुनुपर्छ र उमेर ५० वर्षको हाराहारीमा हुनुपर्छ।आस्थाको यो ट्वीट अहिलेसम्म ६ हजार बढीले रिट्वी
यहाँ बच्चा ज’न्मा’उने उद्योग छ भन्दा तपाई सायद पत्याउनु हुन्न होला ? [ सत्य जान्नुहोस् ]
यो भिडियो हेर्नुहोला , काठमाडौं । यो दुनियाँमा ब'च्चा जन्मा'उने उद्योग छ भन्दा तपाईंलाई सायद पत्याउन गाह्रो भइरहेको हुनुपर्छ ।तर यो सत्य हो । आमा हुनु भनेको प्रत्येक महिलाको लागि सबैभन्दा रमाइलो अनुभूति हो । तर धेरै महिलाले शरीरमा भएको केही समस्याका कारण आ'मा बन्ने मौका प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता महिलाहरूले मा'तृत्वको आनन्द लिन सरोगे'सी प्रक्रि'याकोस'हारा लिन्छन् । सोही कारणले गर्दा अभिभावक बन्न चाहने दम्पतीहरू, पछिल्ला बर्षहरूमा युक्रेनतर्फ लाग्ने गरेका छन् । त्यहाँ बच्चा'हरूको कार'खाना भएको विश्वास गरिन्छ । पूर्वी यूरो'पमा रहेको युक्रेनमा सरोगेसीलाई वैधता दिइएको छ, जसकारण त्यहाँ हरेक वर्ष हजा'रौं बच्चा'हरूको जन्म हुन्छ । अनी मान्छेहरु बाहिरबाट आएर ब'च्चा कि'नेर लैजाने गर्छन् । रूसको नजिक अवस्थित युक्रेन त्यसको सौन्दर्यका लागि विश्वभर प्रसिद्ध छ । तर अब युक्रेन सरोगेसी
यो भिडियो हेर्नुस, यो अंग्रेजी वर्षको दोस्रो र अन्तिम चन्द्रग्रहण कार्तिक महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा अर्थात १९ नोभेम्बर २०२१ शुक्रबार लाग्दैछ।यो मंसिर ०३, २०७८, शुक्रवार हो । यो आंशिक चन्द्रग्रहण हुने बताइएको छ । जुन नेपाल र भारतको आसाम र अरुणाचञ्ल प्रदेशमा मात्रै देखिने छ । यसबाहेक यो चन्द्रग्रहण अमेरिका, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एसिया, अष्ट्रेलिया र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा देख्न सकिनेछ ।ज्योतिषशास्त्रका अनुसार यो चन्द्रग्रहण वृष र कृतिका नक्षत्रमा लाग्ने छ । यस कारणले गर्दा, यो अवधि वृष राशिका लागि समस्याग्रस्त हुन सक्छ। चन्द्र ग्रहण समय (चन्द्र ग्रहण नोभेम्बर २०२१ सुतक काल) भारतीय समय अनुसार चन्द्रग्रहण शुक्रवार, अक्टोबर १९, २०२१ बिहान ११ः३४ बाट सुरु हुनेछ । जुन साँझ ५ः३३ मा समाप्त हुनेछ। नेपालमा भने बिहान ११ः१९ बाट सुरु हुनेछ । साँझ ५ः१८ मा समाप्त हुनेछ । धार्मिक विश्वास
यो भिडियो हेर्नुस, काठमाडौं :श्रीमान डेढ बर्षदेखि कोलकोतामा काम गरिरहेका छन् । उनी,हरुका डेढ बर्षिया छोरा पनि छन् । यसै’बिच श्रीमती कसरी गर्भ’वती भइन् भनेर प्रश्न गरिनु सामान्य कुरा हो । भिडियो याे घट’ना भारतको जगदीशपुर’मा घटेको छ । भाउजु गर्भ’वती भएको थाहा पाएपछि नन्द पुलिसको’मा पुगेकी छिन् । उनले भाउजु ३ महिना’देखि गर्भ’वती भएको बताइन् । यसै’बिच ती युवतीलाई पनि यसबारे उनका श्रीमानले प्रश्न गर्न थाले ।उनलाई पछि घरबाट निकाल्न खोजिएपछि ती युवतीले आफ्नो ग’र्भमा भएको बच्चा आफ्नै श्रीमान’को भएको दावी गरिन् । उनले आफ्नो सपनामा श्रीमान दिनहु आउने गरेको र र उनले सपनामै आफूसँग शारि’रीक स’म्पर्क गरेकाले आफू गर्भ’वती भएको बताइन् । उनले भनकाे जवाफ सुनेर प्रहरी, उनका श्रीमान, साथै सबै छक्क परे । यस्तै पछि थाहा भयो कि उनले एक युवक’सँग दिनहुँ फोन स’म्पर्क गर्ने गरेकी रहिछिन् र बच्चा पनि उनकै
जाडो समयमा हप्तामा कतिपटक से,क्स गर्न उपयुक्त हुन्छ ? जानीराखौं
यो भिडियो हेर्नुस, काठमाडौं । से,क्स आधारभूत आवश्यकता हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ तर, यौ,न,सम्पर्क कति दिनमा कति पटक राख्ने भन्ने कुरा धेरैलाई हेक्का नहुन सक्छ । आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा राखेर यौ,न स,म्बन्ध स्थापित गर्नु एकदमै राम्रो मानिन्छ । हालै गरिएको एक अध्ययनले हप्तामा कति पटक यौ,न स,म्बन्ध राख्दा राम्रो हुने भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौ'न जो'डीकाबीच इन्टि'मे'सीको अध्ययन गरियो र त्यसमा केही रोचक नतिजा देखियो । आर्काइभ्स अफ सेक्शुअल बिहेवियरमा प्रकाशित एक अध्ययनका अनुसार, एक जना विवाहित जोडीलाई वर्षमा ५१ पटक यौ,न स,म्बन्ध राख्नुपर्ने देखायो । यसको मतलव हप्तामा एक दिन अनिवार्य से,क्स गर्नु राम्रो हो । सन् २००० र २००४ कोबीचमा भएको एक अध्ययनले विवाह भइसकेका जोडी जति पटक यौ,न स,म्बन्ध राख्छन् त्यस संख्यामा कमी आएको देखाएको छ । आफ्नो कामको व्यस्ताले, मानिसक त,ना,व जस्ता क